Spotify Lite dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny: azo atao ny mitahiry angona raha mihaino ny mozika ankafizinay | Androidsis
Ny anarana farany Lite, miankina amin'ny karazana developer izay ifandraisany, dia matetika manondro fa a kinova nihena izay tsy manana ny safidy rehetra misy ary maimaim-poana koa izany. Fa raha miresaka serivisy toa ny Facebook, Twitter, Instagram ary ny hafa isika, ity anarana farany ity dia manondro fa ny fampiharana dia natao hanjifa loharano vitsivitsy.
Ilay lehibe farany nanatevin-daharana an'ity fironana ity dia Spotify Lite, fampiharana iray izay Azo alaina ao amin'ny Play Store izao, na dia tsy any amin'ny firenena rehetra aza. Ity kinova Lite ity dia manome antsika fiasa mitovy amin'ny kinova mahazatra ary natokana ho an'ireo mpampiasa manana terminal taloha, fitahirizana kely ...
Mba hametrahana Spotify Lite amin'ny fitaovantsika dia tsy maintsy tantanan'i Android 4.3 na avo kokoa ary manana 10 MB maimaim-poana, noho ny habaka iainany. Ity rindranasa ity dia manana asa mitovy amin'ny an'ny tany am-boalohany nefa koa manome antsika rafitra iray ahafahantsika mifehy ny fanjifana angona entiny amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay dia miasa amin'ny tambajotra finday 2G sy 3G tsy misy olana.
Ireo firenena misy Spotify Lite azo alaina dia:
Raha tsy anisan'ireo voafidy ny firenenao, azonao atao ny mijanona Ity rohy ity ary ampidino mivantana amin'ny fitaovanao ilay rindranasa.
Raha te hankafy ny kinova Lite an'ny Spotify, dia tsy mila manana famandrihana, satria miasa tsy misy olana amin'ny kinova tohanan'ny doka maimaimpoana natolotry ny orinasa soedoà.
Hatramin'ny nanombohan'ny Spotify ampahibemaso tamin'ny taon-dasa, nandondona ilay orinasa, zavatra iray izay dia namela azy hahatratra mihoatra ny mpanjifa mandoa 100 tapitrisa ary mpampiasa maherin'ny 120 tapitrisa amin'ilay kinova tohanan'ny doka maimaimpoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Spotify Lite dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny: azo atao ny mitahiry data raha azo atao ny mihaino ny mozika ankafizintsika
Ny Honor 20 dia efa misy any Espana ankehitriny